चुम्बकीय घटना। प्रकृति मा चुम्बकीय घटना
गठन, माध्यमिक शिक्षा र विद्यालय
वस्तुहरु को चुम्बकीय अन्तरक्रिया - ब्रह्माण्डकै सबै शासन कि मौलिक प्रक्रियाहरू को एक। देखिने यसको manifestations - चुम्बकीय घटना छ। तिनीहरूलाई हुन् उत्तरी रोशनी, चुम्बक आकर्षण, चुम्बकीय आँधीबेहरी र यति मा। डी तिनीहरूले कसरी उत्पन्न गर्छन्? के विशेषता?
चुम्बकीय प्रभाव र गुण सँगै चुम्बकत्व उल्लेख। आफ्नो अस्तित्व लामो समय को लागि ज्ञात गरिएको छ। यो चार हजार वर्ष पहिले लागि, चिनियाँ को नौसेना अभियान मा एक कम्पास र नेभिगेसन सिर्जना गर्न यो ज्ञान प्रयोग गरेको कल्पित छ। प्रयोग सञ्चालन र गम्भीर शारीरिक चुम्बकीय घटना मात्र XIX सताब्दी मा सुरु अध्ययन गर्न। यो क्षेत्रमा पहिलो अनुसन्धानकर्ताहरूले एक हंस Oersted हुन मानिन्छ।
चुम्बकीय घटना ठाउँ र पृथ्वीमा दुवै उत्पन्न गर्न सक्छ, र मात्र चुम्बकीय फिल्ड को हदसम्म देखाइएको छ। यस्तो क्षेत्रहरू बिजुली शुल्क देखि उत्पन्न। जब शुल्क तिनीहरूलाई वरिपरि अझै पनि एक बिजुली क्षेत्र हो। जब उनि सार्न - एक चुम्बकीय क्षेत्र।
एक चुम्बकीय क्षेत्र घटना एक बिजुली वर्तमान को उपस्थिति वा एकान्तरण बिजुली क्षेत्र संग हुन्छ, छ। यो एक शक्ति को चुम्बक र चुम्बकीय कंडक्टर प्रभावित जो भित्र स्पेस क्षेत्र छ। यसलाई आफ्नो निर्देशन छ, र यसको स्रोत देखि दूरी रूपमा घट्ने - कंडक्टर।
शरीर जो वरिपरि चुम्बकीय क्षेत्र एक चुम्बक भनिन्छ। यी को सानो इलेक्ट्रॉन छ। को चुम्बक को आकर्षण - सबै भन्दा प्रसिद्ध प्राकृतिक चुम्बकीय घटना: तपाईं सँगै दुई चुम्बक राख्न भने तिनीहरू आकर्षित हुनेछ या त वा repelled। सबै आफ्नो स्थिति मा प्रत्येक अन्य सापेक्षित कुरा। उत्तर र दक्षिण: प्रत्येक चुम्बक दुई डंडे छ।
डंडे जस्तै घृणा उत्पन्न र व्यक्तिहरूलाई विपरीत, त्यसको विपरीत, आकर्षित छन्। तपाईं दुई मा कटौती भने, उत्तर र दक्षिण डंडे विभाजित छैन। फलस्वरूप, हामी पनि दुई डंडे मा हुनेछ प्रत्येक जो दुई चुम्बक प्राप्त।
त्यहाँ चुम्बकीय गुण छ भनेर सामाग्री को एक नम्बर हो। यी फलाम, कोबाल्ट, निकल, इस्पात, आदि समावेश तिनीहरूलाई बीच तरल, मिश्र र रासायनिक यौगिकहरु छन्। को चुम्बक नजिकै चुम्बक पकड भने, तिनीहरू र तिनीहरूले हुनेछ।
यस्तो शुद्ध फलाम जस्तै पदार्थ, यस्तो सम्पत्ति प्राप्त गर्न सजिलो, तर चाँडै उहाँलाई क्षमा। अन्य (जस्तै, इस्पात) अब magnetized, तर प्रभाव अब समय राख्ने छन्।
हामी चुम्बकीय क्षेत्र चार्ज कणहरु को गति मा खडा भनेर पाएका छन्। तर आन्दोलन कस्तो प्रश्न हुन सक्छ, उदाहरणका लागि, फ्रिज मा फलाम झुन्डिएका टुक्रा? सबै पदार्थ अणुहरु समावेश, र जसमा कणहरु सार्दै हुनुहुन्छ।
प्रत्येक अणु यसको आफ्नै चुम्बकीय क्षेत्र छ। तर, केही सामाग्री, यी क्षेत्रहरू अंधाधुंध फरक दिशामा निर्देशित छन्। यस कारण, तिनीहरूलाई वरिपरि ठूलो क्षेत्र सिर्जना गर्दैन। यस्तो पदार्थ magnetized गर्न सक्षम छैनन्।
अन्य सामाग्री (फलाम, कोबाल्ट, निकल, इस्पात) मा अणुहरु तिनीहरू सबै एउटै दिशा मा हुनेछ भनेर निर्मित गर्न सकिन्छ। फलस्वरूप, कुल चुम्बकीय क्षेत्र र एक magnetized शरीर वरिपरि गठन।
आफ्नो अणुहरु को क्षेत्रहरू यस अर्डर - यो शरीर को चुम्बक, बाहिर जान्छ। यो क्रम भङ्ग गर्न एक हथौडा उहाँलाई हान्न पर्याप्त बलियो छ। क्षेत्रहरू अणुहरु अनियमित आन्दोलन सुरु र चुम्बकीय गुण गुमाउन। भौतिक गरम छ भने एउटै हुन्छ।
शुल्क सार्दा सम्बन्धित चुम्बकीय घटना। यसरी, एक बिजुली वर्तमान चुम्बकीय क्षेत्र आवश्यक हुन्छ एक सञ्चालकको वरिपरि। तर यो वरिपरि अन्य तरिका हुन सक्छ? यो प्रश्न एक पटक एक अंग्रेजी भौतिक Maykl Faradey आग्रह र चुम्बकीय प्रेरणा को घटना पत्ता थियो।
उहाँले स्थिर क्षेत्र बिजुली वर्तमान induce गर्न सक्ने निष्कर्षमा, र एसी - गर्न सक्छन्। को बन्द सर्किट मा वर्तमान हुन्छ र चुम्बकीय क्षेत्र प्रेरणा भनिन्छ। यसरी electromotive शक्ति सर्किट permeates जो वेग क्षेत्रमा अनुपात मा फरक हुनेछ।
खोल्दै फैराडे एक वास्तविक सफलता थियो र बिजुली ईन्जिनियरिङ् को निर्माताहरु धेरै फाइदा ल्याएको छ। उहाँलाई धन्यवाद, यो यांत्रिक ऊर्जा देखि वर्तमान प्राप्त गर्न सम्भव भयो। ऐन वैज्ञानिकहरू लागू र बिजुली मोटर्स, विभिन्न जेनेरेटर, ट्रांसफार्मर, आदि को उपकरण प्रयोग outputted
पृथ्वीको चुम्बकीय क्षेत्र
वृहस्पति, नेप्च्युन, स्याटर्न र अरुणग्रह एक चुम्बकीय क्षेत्र छ। हाम्रो ग्रह - कुनै अपवाद छ। साधारण जीवनमा हामी यो शायद नोटिस। यो कुनै स्वाद वा गन्ध छ, मूर्त छैन। तर यो प्रकृति मा चुम्बकीय घटना सँग सम्बन्धित छ। यस्तो अरूणोदय, चुम्बकीय आँधी वा magnetoreception जनावर रूपमा।
वास्तवमा, धरती दुई डंडे को भौगोलिक संग एकै समयमा पर्नु छैन छ जो विशाल, तर धेरै बलियो चुम्बक छ। चुम्बकीय रेखाहरू ग्रह को दक्षिण ध्रुव बाहिर आउँदै र उत्तर को भाग हो। वास्तवमा पृथ्वीको दक्षिण ध्रुव एक चुम्बक को उत्तरी ध्रुव छ यो (एन - - एस, र रातो संकेत उत्तरी ध्रुव दक्षिणमा पोल संकेत नीलो मा पश्चिम किन छ) भन्ने हो।
चुम्बकीय क्षेत्र ग्रह सतहमा देखि किलोमिटर सयौं विस्तार। यो शक्तिशाली ग्याल्याक्टिक र सौर विकिरण दर्शाउने अदृश्य घरको छानो रूपमा सेवा गर्दैछन्। पृथ्वी, र धेरै चुम्बकीय घटना एक खोल संग टकराव विकिरण कणहरु समयमा गठन गरिएका छन्। गरेको ती सबै भन्दा प्रसिद्ध हेरौं।
हाम्रो ग्रह कडा सूर्य प्रभावित छ। यो मात्र होइन हामीलाई गर्मी र प्रकाश दिन्छ, तर पनि यस्तो आँधीबेहरी जस्ता अप्रिय चुम्बकीय घटना provokes। आफ्नो उपस्थिति सौर गतिविधिमा वृद्धि र तारा भित्र ठाउँ लिन कि प्रक्रियाहरू संग जोडिएको छ।
पृथ्वी निरन्तर सूर्य देखि ionized कणहरु को प्रवाह प्रभावित छ। तिनीहरूले 300-1200 मी / s को एक गति मा सार्न, र सौर हावा रूपमा विशेषता छन्। समय देखि तारा यी कणहरु को एक ठूलो संख्या को अचानक उत्सर्जन मा समय तर। तिनीहरूले एक धक्का शक्ति र उतार चढाव एक चुम्बकीय क्षेत्र रूपमा पृथ्वी खोल कार्य।
सामान्यतया तीन दिन सम्म अन्तिम यस्तो आँधीबेहरी। यस समयमा, हाम्रो ग्रह बासिन्दाहरू केही बेचैनी को अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ। खोल मा उतार चढाव हामीलाई टाउको दुखाइ, दबाव र कमजोरी प्रतिबिम्बित। एक जीवनकालमा एक व्यक्ति 2,000 आँधीबेहरी को एक औसत अनुभव।
उत्तरी रोशनी, वा अरूणोदय - प्रकृति मा थप सुखद चुम्बकीय घटना पनि छन्। यसलाई तीव्र गतिमा परिवर्तन रंग संग skyglow रूपमा नै प्रकट र मुख्य रूप उच्च अक्षांश (67-70 °) मा हुन्छ। बलियो सौर गतिविधि अवलोकन radiance र तल संग।
ध्रुवों सौर चार्ज कण सीमाहरु माथि वरिपरि 64 किलोमिटर टाढा चुम्बकीय क्षेत्र संग आउँदैन। यहाँ तिनीहरूलाई केही जहाँ तिनीहरूले वायुमण्डलीय ग्याँसहरु अन्तरक्रिया पृथ्वी, को चुम्बकीय डंडे पठाइएका छन्, र किन हल्का छ।
उत्सर्जन स्पेक्ट्रम हावा र यसको sparsity को संरचना मा निर्भर गर्दछ। रातो उत्सर्जन 150 400 गर्न किलोमिटर उचाइ मा हुन्छ। नीलो र हरियो रंग अक्सिजन र नाइट्रोजन को एक उच्च सामग्री सम्बन्धित छन्। तिनीहरूले 100 किलोमिटर को ऊंचाई मा आउँदैन।
चुम्बकीय घटना अध्ययन गर्ने आधारभूत विज्ञान - भौतिक। तर, तिनीहरूलाई केही समावेश र जीव सक्छ। उदाहरणका लागि, जीवित जीव को चुम्बकीय संवेदनशीलता - पृथ्वीको चुम्बकीय क्षेत्र पत्ता लगाउन सक्ने क्षमता।
यो अद्वितीय उपहार धेरै जनावर, विशेष गरी प्रवासी प्रजाति द्वारा नजिकै। चमेरो, परेवा, कछुवा, बिरालोहरु, मृग, केही जीवाणुहरु र यति मा। डी फेला magnetoreception क्षमता यो जनावर किलोमिटर दसौं लागि यो देखि स्पेस नेभिगेट र आफ्नो घर फेला पार्न, दूर गर्न मद्दत गर्छ।
एक व्यक्ति अभिमुखीकरण लागि कम्पास प्रयोग भने, त्यसपछि जनावर एकदम प्राकृतिक उपकरण हो। निर्धारण गर्न ठीक कसरी र यसलाई magnetoreception काम किन वैज्ञानिकहरूले अहिलेसम्म सक्दैन। तर यो परेवा तिनीहरूले दूर एक पूर्ण गाढा बक्स मा यही चरा मा बन्द, किलोमिटर सयौं लागि यो बाट लिन पनि भने, आफ्नो घर पत्ता लगाउन सक्षम छन् कि ज्ञात छ। कछुवा पनि वर्ष पछि आफ्नो जन्म ठाउ पाउन।
आफ्नो "superpowers" धन्यवाद जनावर ज्वालामुखी eruptions, भूकम्प, आँधीबेहरी र अन्य प्रकोप आशंका। तिनीहरूले आत्म-संरक्षण गर्ने क्षमता बढ्छ जसले चुम्बकीय क्षेत्र, मा पातलो महसूस कंपन छन्।
Chlorophyll को सूत्र र photosynthesis प्रक्रिया यसको भूमिका
नरभक्षक - यो ... जनावर र मानव मा अर्थ र मान्छेको मासु खाने चलन को उदाहरण
विशेषताहरु Azazello ( "मास्टर र Margarita")
सेल पोषण र विकास। सेल पोषण लागि विधिहरू
अक्सिजन को चपाउने दात ठूलो। अक्सिजन को चपाउने दात ठूलो के हो?
अटोट्रोफिक जीव: संरचनात्मक सुविधा र कामकाज
वेरा Brezhnev। गायक र आफ्नो कथा को बहिनी
बुल्गारिया, समुद्र तट: आराम गर्न सबै भन्दा राम्रो ठाउँ। बुल्गारिया गरेको सर्वश्रेष्ठ समुद्री तट को अवलोकन
ढाड Osteoporosis: लक्षण र उपचार लोक उपचार
सम्म अनुसार रूसी व्यवस्था संग के उमेर भुक्तानी बच्चा समर्थन
Dmitri को नाम के हो? यसको मालिक के हो?
बिरुवाहरु को वनस्पति अंगहरु के के हुन्
पश्चिमी राजनीतिक कुलीन
Deadpool गर्ने हो? ब्रह्माण्डको MARVEL को वर्ण को इतिहास
लातवियाई टेनिस खेलाडी Jelena Ostapenko: खेल मा जीवनी र क्यारियर
एक्कोटल "सेनेगेयर": समीक्षा, फोटो, ठेगाना, फोन
छोटो कोट: चयन गर्न कसरी र के लगाउन
अब्खाजिया। Pitsunda। यो स्थान एक यात्रा लायक छ!